जो अरू सुतेपछि काठमाडौंका सडक... :: भानुभक्त :: Setopati
जो अरू सुतेपछि काठमाडौंका सडक पखाल्छन्
भानुभक्त/तस्बिरः नारायण महर्जन काठमाडौं, मंसिर १५
बिहीबार राति साढे आठ बजे केशरमहल अगाडि सडकछेउ महानगरको गाडी रोकिएको थियो।
कुचीकार धनीराम चौधरी बेल्चाले सडकको धूलो उठाउँदै गाडीमा हाल्दै थिए। चालक राजेश नेपाली एक-एकछिनमा गाडी थोरै अघि बढाउँथे, फेरि रोक्थे।
पौने ९ बजेतिर सवारी पातलो भइसकेको थियो। मध्य मंसिरको चिसो रातमा बाक्लो शित पर्न थालेको थियो। मोबाइलमा ठमेल क्षेत्रको तामक्रम ११ डिग्री देखाउँथ्यो।
केही बेरमा पानी बोकेका दुइटा ट्यांकर केशरमहल अगाडि सडकका दुईतिर रोकिए। एक कर्मचारीले गाडीबाट बोर्ड निकाले। जसमा लेखिएको थियो–'क्लिन द सिटी' अभियान जारी छ। तपाईंहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछ। काठमाडौं महानगरपालिका।
यतिञ्जेल त्यहाँ महानगरका अरू कर्मचारी पनि जम्मा भइसकेका थिए।
केही बेरमा ट्यांकरमा पाइप जोडियो।
रामबहादुर वाइवा पाइपको पानीले अमेरिकी दूतावास अगाडिको फुटपाथ धुन थाले। नगर प्रहरी जवान बालकृष्ण कार्कीले ठूलो टर्च बालेर कतातिर धूलो बढी छ हेर्न सघाए। गाडी चालक बलराम रानाभाटले वाइवा जताजता जान्छन्, पाइप त्यतै तानिदिए।
वाइवा, कार्की र रानाभाट लगायत महानगरका कर्मचारीको पाँच दिनयता काम फेरिएको छ। चिसो रातमा अरु सिरकभित्र गुटुमुटु हुन लाग्दा उनीहरू धूलो पखाल्न काठमाडौंका सडकमा निस्कन्छन्। त्यहाँ तल्लो तहका कर्मचारी मात्र हुँदैनन्, उनीहरूका ‘हाकिम’ पनि सँगै आएका हुन्छन्। वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरि कुँवर र नगर प्रहरीका डिएसपी बिष्णु जोशी पनि उनीहरुसँगै थिए। कुँवरले सबै चाँजोपाँजो मिलाइरहेका थिए भने जोशीको टिम ट्राफिक व्यवस्थापनमा लागेको थियो।
महानगरले यही सातादेखि काठमाडौंको धूलो कम गर्न अभियान थालेको वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरि कुँवरले बताए। ‘दिउँसो सवारी बाक्लो हुँदा पखाल्न सक्दैनौं, त्यही भएर राति पखालेका हौं,’ कुँवरले भने, ‘हाम्रो काम भने झिसमिसे उज्यालो नहुँदै फेरि सुरु भइसक्छ।’
चार दिनदेखि उनी आफैं पनि बिहानदेखि मध्यरातसम्म सडक सफाइमा जुटेका छन्। ‘भर्खर घर पुगेर खाना खाएर आएँ, यो सकेर घर पुग्दा त बाह्र बजिसकेको हुन्छ,’ कुँवरले भने, ‘हामी पनि सँगै हुँदा अरू कर्मचारीलाई काम गर्ने उत्साह बढ्छ, समस्या पर्‍यो भने आवश्यक निर्णय लिन सजिलो हुन्छ।’
कुँवरका अनुसार मध्यरातमा यसरी सडक पखाल्न वातावरण व्यवस्थापन विभाग र नगर प्रहरीका झन्डै दुई दर्जन कर्मचारी स्वंयसेवी रूपमा काम गरिरहेका छन्।
बिहान पनि आउने उनीहरूलाई दिउँसो छुट्टी होइन, आराम गर्ने समय दिइन्छ। ‘भत्ता दिने कि भन्ने कुरा चलेको छ तर अहिलेसम्म केही टुंगो लागेको छैन,’ कुँवरले भने।
उनका अनुसार धूलो हटाउन चार चरणमा काम हुन्छ। लामो समयदेखि सडकछेउ थुप्रिएका धूलो पहिला बेल्चाले फालिन्छ। बाँकी रहेकालाई कुचोले बढाइरिन्छ। ‘अनि पानीले पखाल्छौं, पखाल्दा पनि नगएको धूलोमा अर्कोदिन बिहान ब्रुमर लगाउँछौं,’ कुँवरले भने।
धूलो उठाउन महानगरले सडक विभागसँग ब्रुमर मागेको छ। महानगर अाफैंले ब्रुमर किन्ने भने पनि दुई पटकसम्म टेन्डर गर्दा उपयुक्त बोलपत्र नपरेको कुँवरले जानकारी दिए।
महानगरपालिकाले १२ गते सुन्धाराको सडक पखालेर अभियान सुरु गरेको थियो। त्यसयता रत्नपार्क, भद्रकाली र केशरमहल–जमल सडक पखालिएको छ।
कतै यो चुनाव बेला 'काम देखाउन' थालिएको अभियान त होइन? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा कुँवरले भने, ‘हेर्दै जानुस् चुनावपछि हामी यो अभियान झन् प्रभावकारी बनाउँछौं बरु चुनाव आउन लागेकाले हामीले धेरै काम गर्न पाएका छैनौं।’
उनले चुनावपछि सडक सफासँगै जनचेतना जगाउने र अटेरी गर्नेलाई कारबाही पनि गर्ने बताए।
‘यो सडक हामी महाराजगञ्जसम्म पखाल्छौं, उता बालुवाटार र एयरपोर्टसम्मको सडक पखाल्ने योजना छ,’ कुँवरले भने, ‘विस्तारको काम भइरहेकाबाहेक सबै सडकको धूलो यसरी नै पखाल्ने योजना छ।’
कुँवरसँग कुराकानी सकिँदा रातको १० बजेको थियो। त्यतिबेला पाइपबाट पानी फालिरहेका वाइवा पहिला मेगा बैंक रहेको भवनअगाडि पुगे। भवनका गार्ड रामशरण गुरुङले भने, 'यो गेटमा पनि पानी फालिदिनुस् है।'
वाइवाले त्यो गेटको धूलो पनि पखाली दिए। ‘धूलोले बसिनसक्नु भएको थियो,’ गुरूङले भने, ‘अब राम्रो भयो। महानगरले यस्तो काम गरेको देखेर मलाई खुसी लाग्या छ।’
यसरी चिसो रातमा सडक पखाल्ने काम वाइवालाई कत्तिको गाह्रो लागेको छ त?
‘काम त के गाह्रो हो र? भोलि बिहान यो बाटो हिँड्ने मान्छे धूलो नदेखेर कति खुसी होलान् भन्ने सोचेर जाँगर लागिरहेको छ,’ वाइवाले भने, ‘यो काममा अझ सबैले सहयोग गरे सडक सफाचट हुन्छ नि।’
‘घर त मध्यरात मात्र पुग्नुहुन्छ होला है?’
‘मध्यरात त बाह्र बजेलाई भन्छन्, हामी मध्यरातपछि साढे बाह्र/एक बजे मात्र घर पुग्छौं,’ वाइवाले भने।
साढे १० बजेतिर हामी त्यहाँबाट निस्कियौं। जमल पुलमुनि पुग्दा झन्डै डेढ सय मिटर पर वाइवा सडकको धूलो पखाल्दै थिए।
हिजो राति पनि काम सकेर उनीहरू पक्कै साढे बाह्र/एकतिर मात्रै घर पुगे होलान्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १५, २०७४, ०६:४९:२९